မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း၊ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ၀န်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော ပြည်သူလူထုအခြေပြုရွေ့လျားကျန်းမာရေးဆေးခန်းဆောင်ရွက်ခြင်း
Fri 30 Sep 2016 - 15:36
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်။
မွနျမာနိုငျငံမိခငျနှငျ့ကလေးစောငျ့ရှောကျရေးအသငျး အထောကျအကူပွုပစ်စညျးလှူဒါနျးခွငျးနှငျ့ အဆငျ့မွငျ့စကျခြုပျသငျတနျး(၁/၂၀၁၆) ဖှငျ့ပှဲအခမျးအနားကငျြးပပွုလုပျခွငျး။ (၂၀.၉.၂၀၁၆)
Tue 20 Sep 2016 - 14:58
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်။
မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ဥက္ကဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသို့ ကွင်းဆင်းဆန်းစစ်ခြင်း။ (၁၆.၉.၂၀၁၆)
Tue 20 Sep 2016 - 14:19
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်။
“မေတ္တာစမ်းရေ မူလတန်းကြိုကျောင်း” ကျောင်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီအစည်းအဝေး(၁၅.၉.၂၀၁၆)
Mon 19 Sep 2016 - 11:41
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်။
မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနား (၆.၉.၂၀၁၆)
Wed 07 Sep 2016 - 16:38
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်။
မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမှ နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေရှိ အင်းသာဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်အမက (အင်းသာ) စာသင် ကျောင်းရေစက်ချပွဲနှင့်တပ်ကုန်းမြို့နယ်အတွင်းရေကြီးနစ်မြုပ်နေရာများသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း (၂ - ၉ -၂၀၁၆)
Mon 05 Sep 2016 - 17:06
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်။
အမျိုးသမီးများ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီမံခန့်ခွဲမှု အစရှိသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည့်အဆင့်များတွင် ပါဝင်နိုင်ရေး အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲ စီမံချက်(၂၅. ၈. ၂၀၁၆ မှ ၂၆.၈.၂၀၁၆ ထိ)
Fri 02 Sep 2016 - 14:57
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့မှ ၂၆ ရက်နေ့အထိ။
မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမှ အတွင်းရေးမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် နေပြည်တော်၊ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ဒိုးနွယ်ကျေးရွာ၌ ပြည်သူလူထု အခြေပြုအသိပညာပေးဆွေးနွေးခြင်းဆိုင်ရာ ရွေ့လျားကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းစီမံချက် ပြုလုပ်ခြင်း။ ( ၂၈.၈.၂၀၁၆ )
Wed 31 Aug 2016 - 14:00
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်။
ရေဘေးဖြစ်ပြည်သူများအတွက် ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပွဲ (မင်းဘူးမြို့နယ်) ( ၁၈.၈.၂၀၁၆ )
Thu 18 Aug 2016 - 12:06
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်။
မေတ္တာစမ်းရေမူကြိုရှိ ကလေးများအား ကျောင်းကျန်းမာရေးရက်သတ္တပတ်အစီအစဉ်ဖြင့် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ ကုတင် (၅၀) ဆေးရုံမှ သံချဆေးနှင့် vitamin A ဆေးလုံးများလာရောက်တိုက်ကျွေးခြင်း။
Wed 17 Aug 2016 - 13:32
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်။